China Hydroponic Grow Tent 600 D Oxford Over 95% Reflective Mylar Growth Tente umzi-mveliso kunye nababoneleli | Virex
Hydroponic Grow Tent 600 D Oxford Over 95% Reflective Mylar Growth Tent
Imveliso engundoqo ye-VIREX yokulima i-hydroponic yezolimo intente 600 D oxford kunye ne-95% ebonakalisa iMylar. Sisebenza ngokukhethekileyo kwigadi yasekhaya iminyaka emininzi, sigubungela uninzi lweemarike zaseYurophu nezaseMelika. Sijonge phambili ekubeni liqabane lakho lexesha elide eTshayina.
I-VIREX Grow Tent yenziwe ngelaphu le-Oxford elinoxinano oluphezulu lwe-600D elifakwe ngesilivere ye-PET Mylar enezinga elibonakalisayo elingaphezulu kwe-95%. Izinto zentente ezinzima, ukuqinisa intsimbi emhlophe egqunywe, itiyi ye-ABS emnyama, ukhuseleko kunye nokuzinza.
Ineenkcukacha ezigqibeleleyo, uyilo olulula locango olumilo ka-d, ukungena komoya okupheleleyo, iindlela ezimbini eziziphu zerabha eziphindwe kabini. Iivents ezininzi eziphindwe kabini zingasetyenziselwa ukwenza izihluzi kunye neefeni. Izihluzi ezimhlophe zenzelwe ukunceda ukujikeleza umoya kunye nokugcina ezinye izidalwa ngaphandle kwentente ekhulayo.
I-VIREX Khulisa izixhobo zentente zibandakanya: i-lanyard, i-tray yomgangatho okhutshwayo wamanzi, kunye nemiyalelo yokufakela.
Kulula ukuseta kwaye akukho zixhobo, qiniseka ukuba zonke iinyawo zerabha zijonge kwicala elinye. Amagumbi e-Hydroponic nawo alula ukuchithwa ukucoca okanye ukufuduswa.
I-VIREX Khulisa iintente zingenziwa ngokwezifiso ngobukhulu, umbala, ifestile yokubukela, i-logo, ibhokisi yezixhobo kunye nokunye. Ukubonelela ngenkonzo emva kokuthengisa kwi-VIREX yokukhulisa iintente. Xa ufumana naziphi na iingxaki, nceda uqhagamshelane neqela lethu lenkonzo emva kokuthengisa ngenkxaso yethu.
1. Izinto eziphathekayo: 600D Oxford composite lychee grain aluminiyam film (600D ubukhulu 0.35mm)
2. Umbhobho wentsimbi: Intsimbi ecatyiswe emhlophe TUBE D16 * 0.6mm (umbala unokwenziwa ngokwezifiso)
3. Ufakelo: Itiyi ye-ABS emnyama enzima/izixhobo zentsimbi
4. Umphetho wokusonga: Umphetho oluhlaza wokusonga (umbala olungiselelweyo)
5. Ubungakanani bomngxuma wokungenisa umoya: 4/6/8/10 intshi
6. Ubungakanani befestile yokucoca: 45 * 13.5cm isikrini esimhlophe sefestile yefestile
7. I-tray yamanzi: isiqwenga esimnyama esinamacala amabini silungisiwe
8. Ventilation umngxuma drawstring: black PP drawstring
9. Iziphu: Ubungakanani obumnyama be-10 zipper
Igama lemveliso VIREX Khulisa intente
Uhlobo Igadi yeGreenhouse
Izinto Zentente Ilaphu le-600D leOxford Kwaye Ngaphezu kwama-95% eReflective Mylar
Izihlanganisi Iikona zePlastiki zeABS okanye zeMetal
Izinto zesakhelo D16mm * T0.6mm White Painting Metal
1.Sibonelela nge-OEM / ODM.
2.Siyakwamkela umyalelo omncinci.
3.Sibonelela ngenkqubo yenkonzo emva kokuthengisa.
I-4.Yonke imveliso yethu iya kuvavanya ngononophelo lisebe lethu le-QC ukuqinisekisa ukuba umgangatho kwizinga eliphezulu.
Q1: Ngaba ungayenza ilogo, ukupakishwa kunye noyilo lweemveliso zakho?
A: Ewe, sibonelela nge-OEM/ODM
Q2:Njani ukuqinisekisa umgangatho?
A: Iqela lokuhlola umgangatho wemveliso liqinisekisa izinga elinesiphene lee-odolo; ngaphandle koko, siya kuthatha uxanduva olupheleleyo ngokwenkqubo yethu yenkxaso emva kokuthengisa.
Q3: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: Ngokuqhelekileyo, i-30% kufuneka ihlawulwe yi-T / T kwaye i-70% eseleyo kufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuthunyelwa.
Q4: Uthini umthamo wakho wenyanga wokuvelisa?
A: Umthamo wemveliso yefektri yethu yi-10000 yeentente zokukhulisa iintente ngenyanga.
I-Huizhou Virex Technology Co., Ltd ivelise iintente ezili-10,000 ukuze zithunyelwe kwimarike yaseMelika ngoSeptemba.Iintente zethu zokukhulisa zithandwa kakhulu. Ngoku baya besanda abantu abasebenzisa iintente zokutyala iintyatyambo nezityalo ekhaya.
Kuyabonakala ukuba umgangatho wethu wokuphila uphucuka rhoqo kwaye nendlela abantu abajonga ngayo ubomi yonyukile. Sikholelwa ukuba abantu abaninzi baya kufunda malunga negadi yasekhaya kwaye basebenzise iimveliso ze-hydroponic ze-greenhouse zasekhaya.
Ngaphambili: 2 In1 Khulisa intente 600 D High Reflective Mylar Factory Supply Home Grow Box
Okulandelayo: Uphahla lweCube Khulisa intente eshushu idumile ekungangeni manzi kwiingcango eziKhulisa iikhithi ezigcweleyo zentente
60x60x120 CM Khulisa intente iBhokisi yokuKhula eyenzelwe wena...
Khulisa ibhokisi Tente 90 * 60 * 90 CM Factory Price Room Green
40 * 40 * 120 CM Khulisa iTent Hydroponic Culture Plant...
120 * 60 * 150 CM Eyona njongo yokuKhulisa iTente yokuKhulisa iintente
150*150*200 CM Khulisa iTente yokuLima iGreenhouse...
2 In1 Khulisa intente 600 D High Reflective Mylar Fac...